Divinite Kamen, Dívčí kámen - Czech-Krumlov
Eoropa Repoblika Tseky Český Krumlov
Adiresy: 382 03 Křemže, Repoblika Tseky
Tel: +420 775 213 959
Divinite Kamen dia trano mimanda goavam-be naorina teo amin'ny havoana teo akaikin'ny tanànan'i Cesky Krumlov . Androany, ny sisa tavela sisa no tavela taminy, izay mbola mitohy ny fikarohana. Samy mahaliana ny Divchi-Kamen satria miseho eropeana maromaro izany, satria noforonina nandritra ny taonjato roa.
Manangana tranobe iray
Ny dikany dia Divci-Kamen noraisina avy amin'ny cape izay misy azy. Tamin'ny fotoana nanapahana hevitra ny hananganana trano fiarovana, dia nanodidina ny Reniranon'i Vltava ilay havoana, izay nahatonga ilay toerana ho an'ny fanorenana tsara indrindra. Ireo andriambe izay namorona ilay lapa dia tsy nanelingelina mihitsy fa efa nipetrahana io toerana io - ny tranon'ny mponina dia nipetraka tao amin'ny trano vato. Noroahina ireo mpamboly, ary rava ireo tranobe. Ny sisa tavela taminy dia voatahiry teo amin'ny faritra avaratra-atsinanan'ny havoana.
Ny tranobe kanto dia natsangana lava loatra:
Ny lapan'ny avaratra - 1350-1360 gg. Ny trano dia trano roa ary misolo toerana ivon-toerana ao Divchi-Kamen. Tamin'izany fotoana izany, dia nihady lavaka fanjaitra manodidina ny tranobe.
Ny lapa atsinanana sy ny rindrina vato - tamin'ny taona 1383 dia lapam-panjakana lehibe tao amin'ny efitrano telo misy chapelle iray. Ny manda dia niaro ny fiarovana.
Ny Tilikambo Fiambenana sy latron - fiandohan'ny taonjato XIV. Ny Barbican, izay anaran'ny tilikambo, dia naorina taorian'ny fananganana ny rindrin'ny lapa, ary nanangana ilay lalana lava taty aoriana izay nitarika avy tao Divchi-Kamen nankany an-tanàna.
Niankandrefana ny rindrin'ny lapa sy ny lapa miisa 25 m eo ho eo ny tranon'ny Avaratra sy Atsinanana. Avy eo dia niorenan'ny tokotany malalaka ny tokotanin'ny tranobe, ary tsy azo nafenina ny mason'izy ireo. Ny tranobe atsinanana dia nanana trano fialofana tsara tarehy: Tao amin'ny efitrano tsirairay, afa-tsy ny farany, nisy efitra telo misy rindrina sy varavarankely, ary teo amin'ny fahatelo dia nisy efitrano lehibe nisy andohalambo teo amin'ny rindrina ivelany. Navelany hahita ny trano fiangonana manontolo sy ny ankamaroan'ny valan-javaboary.
Inona no mahaliana an'i Divya-Kamen?
Nolavina ny lapa tamin'ny faran'ny taonjato faha XVI, raha nandinika ny vidiny lafo i Peter IV tao Rozmberk. Raha vantany vao navelan'ny Divchi-Kamen tsy nisy tompony, dia nanomboka nanongotra azy ireo ny tantsaha teo an-toerana noho ny fanorenana ny tranony. Io no iray amin'ireo sambo kely tseky vitsivitsy izay tsy miaraka amin'ireo tantaram-pitiavana momba ny fahirano lava, fa raha tsy izany dia tena mahaliana tokoa ny mpahay tantara sy ny mpizaha tany. Ny farany dia ny mahafantatra fa io no tranobe lehibe indrindra ao Bohemia, ary na ny ruine azy dia toa mahery.
Ankehitriny dia ao amin'ny faritanin'i Divchi-Kamen ny fikarakarana. Mbola mahita sy mamerina ny sisa tavela tamin'ny tranon'ny trano hazo tamin'ny taonjato faha-13 ambin'ny folo ny arkeology. Ny sisa amin'ny lapa dia misokatra ho an'ny mpitsidika. Azonao atao ny mianatra ny faharavan'io manda io, sady miankina amin'ny mpitari-dalana.
Mianara avy any Cesky Krumlov mankany Divchy-Kamen dia afaka mahazo ny fiara eny amin'ny lalana 1439, ny lalana dia tokony ho 25 minitra. Ary avy eo amin'ny fiantsonana Cesky Krumlov dia misy fiaran-dalamby elektro iray nalefa any Trisov. Avy eo amin'ny gara mankany amin'ny lapa dia 1.8 km. Izany fomba izany dia azo resena na an-tongotra na amin'ny taxi.
Monastera an'ny Saint Brigitte
Ny Loharano Gafion
Katedralin'i St. John
Historical Museum (Bern)
Bright manicure 2016
Fofona fitaratra - ny sakafo ara-dalàna sy ara-pahasalamana
Tao anaty efitrano kely
Taratasy ho an'ny sary fampakarambady
Fihetseham-po tao amin'ny kindergarten
Biby misy tsofa ao anaty lafaoro
Fitetezam-paritra amin'ny fampisehoana ririnina - ahoana no fomba fitafiana tsara sy mahafinaritra?
Azoko atao ve ny manavotra volo mandritra ny fitondrana vohoka?
Fihetseham-po sy fahatsapana olona
Karoka carpaccio - hevi-baovao tsy mahazatra noho ny fanaovana sakafo tsotra sy malefaka
Ny atao hoe vu - fanazavana ny tranga
Inona no homena ny zanany vavy 10 taona?
Nahoana ianao no tsy afaka manonona zaza vao teraka?
Tody teteza - fanatsarana sakafo
Ahoana ny fomba fametahana ny sobika eo amin'ny valindrihana eo amin'ny zorony?
Asidra voan'ny pedikure
Ahoana ny fomba hianaranao hanodina ny bao amin'ny alàlan'ny tavy?
"Salom-borona" salady - recipe
Afaka virjina ve ny virjiny?
Alec Baldwin amin'ny Donald Trump dia miady amin'ny ady amin'ny ... vahiny